President Emmerson Mnangagwa - AFRICA-ONLINE.COM
News, Zimbabwe October 5, 2019
HARARE – Zimbabwe’s President Emmerson Mnangagwa on Tuesday pleaded for time and patience to bring the economy back from the “dead,” as his government faces blame for surging inflation evoking dark days under Robert Mugabe….
News, Politics, Zimbabwe October 1, 2019
HARARE, Zimbabwe (AP) — Zimbabwe’s opposition lawmakers walked out of Parliament on Tuesday as President Emmerson Mnangagwa presented his state of the nation address, a sign of the political tensions still gripping the country. The…
HARARE, ZIMBABWE – Following are key milestones in the life of Zimbabwe’s former leader Robert Mugabe. 1924 — Mugabe is born Feb. 21 in what was then British-ruled Southern Rhodesia. 1940s – 1950s — He…
News, Zimbabwe September 6, 2019
HARARE, Zimbabwe (AP) — Robert Mugabe, the longtime leader of Zimbabwe who was forced to resign in 2017 after a military takeover, has died. His successor Emmerson Mnangagwa confirmed Mugabe’s death in a tweet Friday,…
News, Nigeria, South Africa September 4, 2019
LAGOS, Nigeria (AP) — South African-owned businesses operating in Nigeria are being targeted with violence in retaliation for xenophobic attacks carried out against Africans working in South Africa. A man stands by a bonfire during…
News, U.S.A, Zimbabwe August 27, 2019
WASHINGTON (Reuters) – U.S. disappointment with Zimbabwe’s government keeps growing amid the heavy-handed response of authorities to any form of opposition, a senior State Department official said on Monday following a crackdown last week against…
Elections, News, Zimbabwe February 2, 2019
Zimbabwe: President Mnangagwa skips 1st rally since deadly unrest
MT. DARWIN, Zimbabwe (AP) — Zimbabwe’s president has skipped his first political rally since last month’s deadly military crackdown on protests so he could explain the unrest to fellow African leaders, a spokesman said Saturday….
Human Rights, News, Zimbabwe January 18, 2019
Zimbabwe: Groups say at least 12 killed, 600 arrested in unrest
HARARE, Zimbabwe (AP) — The Latest on Zimbabwe unrest (all times local): 7:10 p.m. A collection of Zimbabwe human rights groups says at least 12 people have been killed, at least 78 have been shot…
News, Zimbabwe January 18, 2019
Zimbabwe: Country in ‘total internet shutdown’ amid violent crackdown
HARARE, Zimbabwe (AP) — Zimbabwe on Friday faced a “total internet shutdown,” a media group said, after a days-long violent crackdown on people protesting a dramatic fuel price increase. Badly injured people streamed into a…
Elections, News, Politics, Zimbabwe August 24, 2018
Zimbabwe: Court Confirms Mnangagwa’s Election Victory
JOHANNESBURG/HARARE — Zimbabwe’s Constitutional Court has dismissed a challenge seeking to nullify the results of the country’s July 30 presidential election. The ruling Friday clears the way for the inauguration of incumbent President Emmerson Mnangagwa…